विचार | Indrenionline.com | Page 4
स्वाभिमानको रक्षा पहिलो प्राथमिकता
चीनका सुरक्षाकर्मीको हानेको गोलीबाट २०१७ असार (जुन, १९६०) मा मुस्ताङमा सीमा सुरक्षामा बसेका नेपाली सिपाहीको मृत्यु भयो । नेपाली भूमिमा चिनियाँ सेना प्रवेश गरेको र नेपाली सैनिक मारिएको घटनालाई नेपाल सरकारले चीनका सामु उठायो । प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले चीनका तर्पmबाट माफी माग्दै क्षतिपूर्ति दिए । घटना मैत्रीपूर्ण रुपमा सुल्झाइयो । फेरि यस्तै प्रकृतिको घटना भएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा ...
देविकृष्ण रोकाया पश्चिमको अफगानिस्तानदेखि पूर्वको म्यानमारसम्मको समग्र हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित तालहरुको तुलनामा सबैभन्दा सुन्दर मानिएको रारामा पुगेका एक चिनियाँ पर्यटकले भनेका थिए “मानसरोवर सँधै ठूलो र राम्रो लाग्थ्यो, तर राराको तुलनामा मानसरोवर हरेक हिसाबमा तल रहेछ ।” २०२० सालमा राजा महेन्द्र रारा पुग्दा राराको सुन्दरताप्रति लोभिदै रारा कि अप्सरा शिर्षकको कविता समेत रचना गरेका थिए । सोहि बर्ष जिल्ला पञ्चायतको ...
राजनीतिको चक्रव्यूहमा पर्दैछ नेपालीपत्रकारिता
भानुभक्त आचार्य अघिल्ला चुनावहरुभन्दा यसपाली पत्रकारहरुको चुनावको चर्चा अधिक छ । अहिले भइरहेको यो चर्चा पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास, श्रमजीवी पत्रकारहरुको सेवासुविधा वा प्रेस स्वतन्त्रतामा आइपरेको व्यावधानलाई चिर्नका लागि भएको होइन । राजनीतिक दलआबद्ध प्रेस क्लबहरुले सिफारिस गरेअनुसार महासंघले नयाँ सदस्यता अनुमोदन तथा वितरण नगर्दा भएको किचलोले उत्पन्न भएको हो । परिणाम स्वरुप, छ दशक लामो इतिहास भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ...
माघको दोस्रो हप्ता बोसोयुक्त साबुनविरुद्ध शृंखलाबद्ध विज्ञापनहरुले काठमाडौंबाट प्रकाशित केही अखबारहरु भरिए । मूल पृष्ठ र त्यसको भित्री पृष्ठमा समेत पूरै विज्ञापन थियो, जसले खोल नभएका सबै साबुनहरुमा बोसो प्रयोग हुन्छ भन्ने भ्रामक सन्देश दिएको थियो ९हेर्नुहोस् विज्ञापन०। विज्ञापनको शृंखला हप्ताभरि चल्यो । पत्रकारहरुका लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्नु’ जस्तो भए पनि प्रकाशकहरुले लाखौं आम्दानी गरे । करोडौं रुपैया खर्चिएर ...
कथित प्रधानाध्यापक सुरेश यादवलाई कडा सजाय होओस
हरेक शिक्षण सस्था बाल मैत्रीपुर्ण हुनु जरुरी छ ! हरेक शिक्षण सस्थामा दक्ष परामर्शदाता हुनु जरुरी छ ! साथै सिकाइको माध्यम घोकाइ नभएर प्रयोगात्मक हुनु पर्दछ ! राजधानिको धुम्बाराही स्थित लुम्बिनी बिगनर्स एकाडेमीको कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्र सुदिप दाहाललाइ प्रधानाध्यापक सुरेश यादबले धेरै शिक्षकलाइ अनावश्यक प्रश्न सोधेर हैरान पारेको आरोपमा चरम यातना दिएको समाचार आयो । सुदिपको कम्मर मुन्तिरको ...
नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखाको नेता को ?
जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखाको नयाँ नेतृत्व को होला भनि सरोकारवाला निकायहरु वीच दैनिक चियागफ बाक्लै हुन थालेको छ । दुई जना पत्रकार जम्मा भएपछि यिनीहरु के भन्छन भनि चासो गरिन्छ । सभापति भन्ने वित्तिकै हुरुक्कै हुनेहरुको जमात पनि सानो छैन । म सभापति बन्न पाए यस्तो उस्तो गर्थें भनेर अहिले चियागफमा भन्नेहरुको लर्को पनि लामै छ । जिल्लामा महाविपत्ती ...
डा. सुरेश आचार्य सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलेको अघोषित मुठभेडको राजनीतिलाई निकास दिएको छ । अदालतको फैसलाबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै खुसी छन् । ‘सर्प पनि म¥यो, लठ्ठी पनि भाँचिएन’ भनेझैं भएको छ । अदालतको फैसला एउटा छ । फैसलाको व्याख्या गर्ने दुई पक्ष फैसला आफ्नो अनुकूल आएको ठानिरहेका छन् । यो त्यही सर्वोच्च अदालत हो, जसले २०५२ साल भदौ २४ ...
छाउगोठ महिलालाई जिउँदै गाड्ने एउटा चिहान हो
सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्वास नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखामा रहेर कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा गाउँ टोलमा घुमेर त्यहाँका महिलाहरुको जीवनयापनलाई नजिकबाट हेर्दै छु । बचबयहाँ महिलाहरुको वास्तविक अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ । महिलाहरु सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, राजनीतिक, आर्थिक रुपमा धेरै पछि धकेलिएका छन् । उनीहरुको समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उनीहरुका समस्याको पहिचान नै नगरी केन्द्रबाट उनीहरुकै नाममा योजना, कार्यक्रम ...
मानिस स्वभावैले एक विवेकशिल र जिज्ञासु प्राणी हो । उ जहिले पनि आफ्नो सामुन्ने आउन कुनै पनि किसिमको तगारो हटाउँदै अगाडी बढ्नका लागि प्रयत्नशिल रहने गर्दछ । यहि विवेकले नै उसलाई अरु प्राणीबाट छुट्टाएको हुन्छ । के असल के खराब, के ठिक के बेठिक, के गर्न हुन्छ के गर्न हुन्न भन्ने ज्ञान उसमा रहेको हुन्छ । यसै विवेकका कारण मानव ...